Nursing Advanced Online Co... | Myanmar
Nursing Advanced Online Course
This online advanced nursing course is open to all qualified nurses, nurse educators, and post-graduate nursing students. This course is an opportunity to develop your skills and discuss your work. There is no assessment.
Please contact nursingcourse.online@gmail.com for any questions - you must use this number every time you answer questions
Read our safety document here
Case-Based Discussion & Journal Club
We are launchinganew programme for qualified nurses across Myanmar (students are also most welcome!).
This programme will bearelaxed discussion-based webinar where nurses from across Myanmar and other countries will present cases and discuss how they managed the case and what it taught them. There will be no examination or assessment.
We want to make this as helpful as possible so please suggest cases you would like to hear about.
As this weekly webinar continues we would like to encourage many nurses to presentacase. If you would like to volunteer, please email nursingcourse.online@gmail.com.
You can instantly join to our Telegram channel: https://t.me/Myanmaradvancednursing
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဘွဲ့ရ သူနာပြုများ အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်၍ Course တစ်ခု စတင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ ဘွဲ့ရ သူနာပြုများ ဆိုသော်လည်း Course ကို စိတ်ဝင်စား သော သူနာပြု ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များလည်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ Case presentation ပုံစံဖြင့် Webinar တွင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ် ပါတယ်။ဦးဆောင်ဆွေးနွေး တင်ပြသွားမည့် သူနာပြုများမှာ ပြည်တွင်းမှ အတွေ့အကြုံရှိသော သူနာပြုများအပြင်၊ နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာ သူနာပြုများ ပါ၀င် ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်တက်ရောက်ကြမည့် သူနာပြုများကို Evaluation သို့မဟုတ် Assessment ပြု လုပ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဆွေးနွေးတင်ပြသည်များကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နားထောင်းပြီး ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
တစ်ပတ် တစ်ခါ အပတ်စဉ်တိုင်း Webinar ပုံစံဖြင့် Case presentation ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ရာ ယခု Survey တွင် မိမိအနေဖြင့် သိလိုသော၊ ဆွေးနွေးပေးစေလိုသာ Case များကို အကြံဉာဏ်ပေး စေလိုပါသည်။ အကယ် ၍ မိမိအနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Case Presentation လုပ်လိုရန် ဆန္ဒ ရှိပါက nursingcourse.online@gmail.com သို့ အီးမေးလ်ပို့ပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါသည်။
စိတ်ဝင်စားသူများ Telegram channel တွင် တခါတည်း Join ထားနိုင်ပါသည်။ https://t.me/Myanmaradvancednursing
A patient who required an ECG and analysis of basic cardiac rhythms
​A patient where fluid management was important
Research/ Journal club
Session 1- Research terminologies
A patient who had an endoscopic procedure
Session 2- Qualitative research and what you look for when critiquing
Session 3- Quantitative research and what you look for when critiquing
Session4-Reviewing an article - template and agreeing topics of interest forajournal club
Session5- Onwards: start reviewing an article.
Journal Club Paper 1 discussion